Imaphi amasoftware we-webcam angcono kakhulu weWindows njengamanje? | Iforamu yeselula
UJose Albert | 16/06/2022 00:14 | Kubuyekezwe ngomhla ka- 16/06/2022 15:44 | Izinhlelo zokusebenza, Windows
Njengoba kuxhumene njengamanje wethu Umphakathi wekhulu lama-XNUMX, akumangazi ukuthi ukuxhumana noma imiyalezo ngezithombe namavidiyo, ube ngomunye wemidiya ekhethwa yibo bonke. Ngakho-ke, uma kuziwa ekutholeni idivayisi yeselula noma ikhompuyutha, sizama ukuqinisekisa ukuthi ikhamera yayo noma ikhamera yewebhu ingeyekhwalithi engcono kakhulu esingayithola.
Futhi nakuba i ama-webcams amakhompyutha Bavame ukuhlanganisa zabo isofthiwe yokufaka nokuphathaKuhlale kukuhle ukuhlangana nabanye «isoftware yewebhu engcono kakhulu yamawindi » kanye nezinye izinhlelo zokusebenza. Ngakho-ke, ngezansi sizoncoma ezinye ezidume kakhulu phakathi kweziningi ezikhona.
Ungayisebenzisa kanjani i-GoPro njengekhamera yewebhu yekhompyutha
Futhi, ngaphambi kokungena kule ncwadi yamanje ngephuzu elihlobene kakhulu nalo ama-webcams ku amakhompyutha, ikakhulukazi ukuthi kanjani «isoftware yewebhu engcono kakhulu yamawindi ». Sincoma ezinye zethu okuthunyelwe okuhlobene kwangaphambilini.
Uyisebenzisa kanjani iselula yakho njengekhamera yewebhu nalezi zinhlelo
1 Isoftware ye-Webcam: Izici Eziyinhloko
1.1 Kungani usebenzise isofthiwe yomuntu wesithathu ikhamera yewebhu?
1.2 Isoftware ye-Webcam ephezulu engu-3 yeWindows
1.2.1 Capture Logitech
1.2.3 Wena Kam 9
1.3 Ezinye izinhlelo ezifanayo zeWindows ne-macOS
1.4 Ezinye izindlela ezingcono kakhulu zokuphatha ama-webcams ku-Linux
Isoftware ye-Webcam: Izici Eziyinhloko
Kungani usebenzise isofthiwe yomuntu wesithathu ikhamera yewebhu?
Njengoba sishilo ekuqaleni, ama-webcams, namuhla, ba into ebaluleke kakhulu (peripheral). kukhompuyutha yanoma ubani. Njengoba, ngalé kokusisebenzela ukuthatha isithombe sakho esilula (isithombe ozishuthe sona) noma ukwenza amakholi ethu evidiyo, ngawo singenza izinto eziningi ezengeziwe, ngesofthiwe efanele.
Futhi ngokunembile ku-inthanethi, njengenjwayelo, singathola izinhlelo ezihlukahlukene lokho kuzosivumela ukuthi sihlangabezane nale nhloso. Ngakho ngokuqinisekile nalokhu okuncane uhlu lwesoftware yewebhu, abanye bangase bathole uhlelo oludingekayo kuhlobo lomsebenzisi nesidingo esidingekayo. Njengoba, eziningi zalezi zinhlelo zinikeza ukusebenza okukhulu kulolu hlobo lwedivayisi.
Isibonelo, ngale software yekhamera yewebhu ungangeza imiphumela y izici kumavidiyo nezithombe noma izithombe, kanye ne, rekhoda, hlela futhi wenze amavidiyo abe ngeyakho, ukuze uthole umsebenzi ongcono kumaSocial Networks. Noma, bangaguqula lezi zibe a isici sokuphepha sekhompyutha ukuze kuzuze ikhaya noma ihhovisi. Ngokubanika amakhono, ukubhekwa kwevidiyo noma ikhamera ebonwa ubuso, phakathi kwabanye.
Isoftware ye-Webcam ephezulu engu-3 yeWindows
Capture Logitech isofthiwe yekhamera yewebhu ekuvumela ukuthi udale okuqukethwe ngalawa madivaysi, ngendlela elula, esheshayo futhi enembile. Njengoba, ungarekhoda okuqukethwe kwevidiyo kwekhwalithi ephezulu okuvela kubo, bese ukwaba nomhlaba wonke. Futhi, kwenza kube lula ukuqopha kusuka kumakhamera ewebhu amabili noma ngaphezulu, ukushintsha kalula phakathi kwezigcawu eziyisithupha ezihlukene, kungaba isithombe-esithombeni noma ngapha nangapha. Futhi phakathi kweminye imisebenzi eminingi, kukhona okulandelayo:
Ukuqoshwa kwevidiyo okuqondile okungu-9:16 ukuze uthole umuzwa olungiselelwe wokubuka kumaselula nenkundla yezokuxhumana.
Ukuthumela ividiyo ezisekelweni zokusakaza (i-YouTube, i-Facebook Live noma i-Twitch) nge-OBS ne-XSplit.
Ukwenza kube ngokwakho okuqukethwe kwamavidiyo ngombhalo, imibala nezizinda ezibukhoma.
Ukusetshenziswa kwezihlungi, izinguquko kanye nemingcele ukuze kube lula ukwenziwa ngokwezifiso kokuqukethwe okukhiqizwa.
Ukusetshenziswa kwemisebenzi yokulawula indawo yokubuka, ubukhulu bokulinganisa kanye nokulungiswa kokurekhoda.
Ukumiswa kwamaphrofayili wabasebenzisi abangafika kwabayisi-6 ukuze kulondolozwe ukucushwa okuhlukahlukene okudingekayo.
Iyatholakala ngeWindows ne-macOS.
ManyCam isofthiwe yekhamera yewebhu, etholakala kuphela ku-Windows, evumela indlela elula yokusebenzisa amadivaysi anjalo ekusakazeni bukhoma. Ngaleyo ndlela, ukuze ukwazi ukukhiqiza amavidiyo abukhoma ekhwalithi yobuchwepheshe ekusakazeni izinkundla, izinhlelo zokusebenza zenkomfa ngevidiyo namathuluzi okufunda amabanga. Futhi kulokhu, isibonelo, kuvumela ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwezizinda ezibonakalayo, eziwusizo kakhulu ekudlulisweni kwevidiyo okubukhoma nokuqondile. Kanjalo ukwenza kube lula ukufiphalisa, ukusula futhi esikhundleni sangemuva ufake izithombe noma imithombo yevidiyo ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa isikrini esiluhlaza. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa nezinye izinketho noma izici, njenge:
Ukusebenza kwebhodi elimhlophe ukuze udwebe kalula, wenze i-doodle futhi wengeze umbhalo ngenkathi uqopha.
Ukungenisa nokuthekelisa izilungiselelo zezilungiselelo kwamanye ama-ManyCam ukuze wonge isikhathi nokwenza umsebenzi ube lula.
Sebenzisa isici sekhamera ukuze uthumele okuqukethwe okuhlukile kunekhamera yewebhu yangempela.
Ukusetshenziswa kwethuluzi le-Chroma Key ukushintsha ingemuva lokudlulisela ngezithombe, amavidiyo noma okunye.
Ukuphathwa kwemithombo yevidiyo efika ku-200 ukuze kwandiswe amandla okudala omsebenzisi.
Ukusetshenziswa kwezingqimba ezinamakhona ayindilinga kanye nekhono lokuwavala ukuze kuthuthukiswe ukuhanjiswa.
Wena Kam 9
Wena Kam 9 isofthiwe yekhamera yewebhu enguqulweni yayo yamahhala (ebalulekile) evumela ngaphandle kwenkinga ukwenza izikhathi zayo i-videochat phakathi kwabangane noma ikholi yevidiyo yasemsebenzini; kuyilapho, enguqulweni yayo ekhokhelwayo (i-deluxe) ungafaka imiphumela yevidiyo ngesikhathi sangempela, ukhetha emiphumeleni engaphezu kuka-200 ejabulisayo nethakazelisayo; futhi uhlanganise ikhamera yewebhu kuzinhlelo zokusebenza zengxoxo yevidiyo, njenge-Skype, kanye nezinsizakalo zokusakaza, ezifana ne-Facebook Live & YouTube Live. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa nezinye izinketho noma izici, njenge:
Faka izithuthukisi zesikhumba zesikhathi sangempela kanye nezimonyo ukuze ubukeke kangcono ku-inthanethi.
Engeza izihloko ngokwezifiso nezithombe zamaseshini okusakaza bukhoma.
Yenza ukulungisa okuzenzakalelayo nokwenziwe mathupha ezintweni ezifana nokukhanyisa, ubukhali, nomsindo.
Ngena futhi uphume Kuhlelo Lokusebenza usebenzisa ukubona ubuso.
Ezinye izinhlelo ezifanayo zeWindows ne-macOS
Ngemisebenzi yenhloso ejwayelekile
i-camwiz webcam rekhoda
Izilungiselelo zekhamera yewebhu
Ikhamera yewebhu ye-SparkoCam Virtual
Ngemisebenzi yokuqapha ividiyo
Okwezici zokubonwa kobuso
I-Rohos Face Logon
Ezinye izindlela ezingcono kakhulu zokuphatha ama-webcams ku-Linux
Ngamafuphi, lezi «isoftware yewebhu engcono kakhulu yamawindi » ukuthi namuhla singancoma ngayo ukuzethemba okuhle kakhulu. Ngakho uma udinga eyodwa, kuyindaba nje ukulanda nokuhlola. Futhi uma unayo, macOS noma Linux, sithemba ukuthi izinhlelo ezinconyiwe zenhloso efanayo nazo zizoba usizo oluhle kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo zokusebenza » Isoftware yewebhu engcono kakhulu yeWindows